चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्नो हुनेवाला श्रीमानको लागि राखिन् यस्तो सर्त!
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा प्रायः काम र आफ्नो भनाइका कारण चर्चामा आउने गर्छिन् । बलिउडबाट हलिउडको यात्रा गरिरहेकी प्रियंका पुनः एकपटक आफ्नो भनाइका कारण चर्चामा आएकी छन् । व्यवसायिक जीवन र व्यक्तिगत जीवनलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रियंका यसपटक व्यक्तिगत कुराले चर्चामा आएकी हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रियंकाले कहिल्यै पनि मिडियामा आफ्नो करिअरको समाचारको विषयमा प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । तर, उनले …
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो लिफ्टको रेकर्ड तोड्दै चीनले रच्यो अर्को किर्तिमानी !
प्रविधि र निर्माण जगतमा सबैभन्दा अगाडि रहेको चीनले फेरी अर्को नयाँ किर्तिमान रचेको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो आउटडोर लिफ्टको निर्माण गरेर पुरानो वर्ल्ड रेकर्ड तोड्दै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो देशको नाम थपेको छ । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बमोजिम यो लिफ्टको उचाइ ३२६ मिटर अर्थात् झण्डै १००० फिट अग्लो रहेको छ। उक्त लिफ्टमा ३ वटा डबल …
कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन् । ज्योतिषशास्त्रले भने बाटोमा भेटिएको पैसाको कारण र संकेत बताएको छ । त्यसोभए बाटोमा पैसा भेटिए के हुनसक्छ त त्यसको मतलब ?ज्योतिषका अनुसार सडक वा बाटोमा पैसा भेटियो भने यसको अर्थ तपाई निकै नै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । यसका साथै यस्ता …
यसरी चुट्कीमै पाउनुस् आफुलाई मन परेकी केटीको मोबाईल नम्बर
कोही केटाहरू लजालु किसिमका हुन्छन् र मनको कुरा कसैसँग शेयर गर्दैनन् । अलि फरवार्ड खालका केटाहरू त पहिलो भेटमै केटीको नम्बर हात पार्न सफल हुन्छन् । तर केटीहरूले कहाँ सजिलै नम्बर दिन्छन् र ? यहाँ दिइएका केही टिप्स अपनाउनुभयो भने केटीले नम्बर दिन हिचकिचाउँदैनन् । १. भरोसा केटीको नम्बर माग्नुअघि पहिला उसको विश्वास र भरोसा जित्नुस् । हतार गर्नुभन्दा बिस्तारै …
के तपाईले तस्वीरमा अनुहार देख्नुभयो ? यदि देख्नुभएको भए तपाईलाई यस्तो रोग लागेको छ
तपाईंले कुनै पनि कुरा ध्यान दिएर हेर्दा त्यसमा अनुहार देख्नुहुन्छ ? देख्नुहुन्छ भने यो कुनै जादू हैन । यसलाई मेडिकल टर्मिनोलोजीमा पेरीडोलिया भनिन्छ । यो खासमा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जसमा मानिसहरूलाई कुनै पनि कुरामा ध्यान दिँदा अनुहार देखिन थाल्छ । क्यानाडाको युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोका प्राध्यापक कांग लीले पेरीडोलियामाथि धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । यो रोग लागेका मानिसले चिन्तित नभई …
मृत शरीरलाई काँच्चै खाने कस्तो बिचित्रको परम्परा
संसारभरि यस्ता विचित्रका परम्पराहरु छन् , जसलाई सुनेर हामी सबै अचम्ममा पर्ने गर्दछौं | कुनै ठाउँमा लाशलाई खुल्ला रुपमा फ्याँकिएको हुन्छ भने कुनै ठाउँमा जलाइएको हुन्छ । कतै बच्चाहरुलाई उचाईबाट तल फ्याँक्ने गरिन्छ | यसरी ठाउँपिच्छे मानिसहरुको परम्परा पनि भिन्न हुने गर्दछ | आज हामी तपाइलाई यस्तो एउटा बिचित्र परम्पराको बारेमा जानकारी दिन्छौं , जसलाई सुनेर तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ | …
“जीवनमा ठूला घटना घट्नु अघि हुन्छन् यस्ता संकेत”
ज्योतिष शास्त्रले भविष्यमा हुने घटनामा वर्तमान क्रियाकलाप र घटनाले समेत प्रभाव पार्ने बताउँछ । कतिपय भविष्यमा हुने घटनाका लक्षणहरु अगाडी नै देखिने समेत ज्योतिष शास्त्रको दावी छ । भविष्यमा ठूला घटना हुँदा देखिने संकेत यस्ता छन् । दुध विहानकै दुध देख्नु शुभ मानिन्छ । दुध उम्लेर भने झनै राम्रो मानिन्छ । तर दुध उम्लेर पोखिनु चाँहि नराम्रो मानिन्छ । विहानै …
जोन बचाऊ भनेर चिच्याउँथे तर कसैले सुन्दैनथे
सात दिनसम्म ललितपुरको फूलचोकी जंगलमा हराएर रूखको चेपमा अड्किएको अवस्थामा उद्धार गरिएका १७ वर्षीय जोन तामाङको बीएन्डबी अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। उनको हात-खुट्टाका औंला तथा छाला नीलो भएको छ। दुवै खुट्टा सुन्निएको छ। घुँडामा सामान्य समस्या देखिएको छ। आफैँ उठबस गर्न सक्दैनन्। सात दिनसम्म घना जंगलमा अलपत्र पर्दा शरीरमा चिसो पसेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। आजकोअन्नपूर्ण पोस्टमा खबर …
छोरीको गुप्ताङ्गमा नक्कली लिङ्ग टाँसेर बाबुआमाले नै गरे आश्चर्यजनक हल्ला
कहिलेकाहीँ अनौठा र अपत्यारिला समाचारहरु आउँछन् झट्ट सुन्दा कत्तिपनि विश्वास लाग्दैन तर ती यथार्थ हुन्छन् स्वीकार गर्न कर लाग्छ । हो बंगलादेशमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । सुन्दा कुनै चलचित्रको कहानी जस्तो लाग्ने तर यथार्थ हो, यो कुनै कथा वा फिल्मको कहानी होइन । तपाईँले जादुगरको जादु देख्नुभएको भएको होला एउटा छडी घुमाएर कस्ता किस्सा देखाउँछ । अनि विभिन्न …
ज्योति मगरले गरिन् यस्तो बबाल, तिघ्रा मात्र होइन अरु नि ठुलो छ भनेपछि …
स्टेज चढेपछि सेक्सका कुरा भन्न नविर्सने ज्योति बेलाबेलामा सामाजिक सन्देश पनि बाँड्छिन् । सचेत पनि गराउँछिन् तर पूस्तुति भल्गर नै हुन्छ । तैपनि उनको क्रेज भने बढ्दो छ । हेर्नुहोस् चितवनको खिचरा महोत्सवमा ज्योतिको प्रस्तुति भिडियो सहित
खासगरी हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन। यसमाथि पनि सबैले सुन्दरतालाई मात्रै जीवनसाथीको मापक नराख्न पनि सक्छन्। यद्यपी, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका पुरुषहरुले सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी पाउने विश्वास गरिन्छ। तुला राशि: ज्योतिष शास्त्र अनुसार तुला राशि भएका पुरुष सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशि भएका व्यक्ति …
Page 8 of 427« First...678910»203040...Last »